February 27, 2021 Xuseen 10
Gaba-gabadii Taliye Axmed Cabdullaahi Cabdi ayaa tilmaamay in howlgalka uu sii socon doono, isagoona shacabka Gobolka Sool kunool ka dalbaday inay gacan siiyaan Ciidanka Booliska Somaliland, si looga wadashaqeyo nabadgalyada.
Mid madaxa bastooladahaas miskood uga dhufta ma iska waayeen kan Iidoorka uga shaqaynaya sidii hubka uga dhigi lahaa sidii haweenna uga dhigi lahaa reer Laascaanood, halka wiilasha habar jeclo iyo Garxais Hargaysa iyo Burco ku Xarragoodaan hubka oo aan lagu dhicin…War waxani dheddignnimo iyo fulaynnimo ka badan maxaa ka qaldan raggan toorreyda Isaaqu guntigooda ka furayo….Iidoorkan askartii ay soo xawileen gaajada Tukarraq ugu aqaanayaan oo wada baxsday aaggiina banneeyay in saacaddan laga cabsadaa waa dullinnimo ..
Popular Front for the Protection of Somalia (P.F.P.S) says:
hhhhh sheekadu waa isaaqa hubeeya, qabiiladda kalena hubka ka dhiga. waxa xigi doona xaryahoo lagu guro siday china sameenayso. miskiinaa miska la fuulo leh!
Waxan la yaabay kuwa halkan caacda ka haya ee fulayada ah, ee baraha bulshada ka qaaq leeya, adeer Laascaanood amni , horumar iyo kala dambayn iyo dawladnimo baaka jirta, sida eeyda isaga qayliya, dadku dantooda iyagaa idiinka yaqaan, baahida nin baa kula deydeyi daalna kaa badin, xaalkiinu waa af ka nool, haddii aad xabbad ridaysaan maad timaadaaniin, fulay fulay dhalay oo khamro cabsan, cidina wax weydiin mayso,
Waxaan maqaati ka ahay reer Laascaano iyo daraawiishba waxaa heerka gaarsiiyay Puntland OO DHIIGOODA BEECISAY HESHIISNA KULA AH ISAAQLAND, WAA KUWII AY ISLAHAAYEEN EHELNIMO AYAA KA DHAXEEYA, ALLOW MAHADAA QARANKANA IN LAGA ILAALIYO SIDAA BEY U IIBSANAYAAN
Dhulbahante isagaa dhulkiisa xaraashtey cuuuc iyo caac waxba sheegi meyso dhaqanka dhulbahante waa iney meel walba wax ka cunaan…..XOREYSTA SOOOL sidee qabiil dhulkiina idinkaga qaadi karaa CIDNA HA EEEDINA ADINKAA DHULKKINA XARAASHTEY
350 guri baa Aadan Madoobe Habarjeclo ka dhisayaan Laascaanood waqtigaan xaadir ah ..dadka guryaha dhisanaya waxay u badan yihiin rag xidid la ah Dhulbahante , lacagta lagu dhisanaya guryaha dad qaar iyagaa iska leh qaarkoodna waxaa soon aamaahiyey shirkadaha Dahabshiil iyo Indhodeero..
Aaway ganacsatadii Dhulbahnte maxay u dhisi la’yihiin guryaha dadkooda sida Dahabshiil iyo Indhodeero. Isaaq ma waxi ka caqli badan yihiin dadka kale?
Dhulbahante waa inay dhistaan dhulkooda oo joojiyan wax aan jirin, wa iney. bartan sida loola noolaado dadka kale, Isaaq iyo Majerteen midkoodna wax ma tari doono. Dadku waxay rabaan nabad gelyo iyo horumar.
Isaaq Laascaanood uma dhisayo dhulbahante ee iyagaa dhisanaya muddo yar ka dibna Laascaanood waxay noqoneysaa magaalo Isaaq leeyahay…
Haddaad weydiisid sababta ay dhulbahante sidaas raali uga yihiin waxay kuugu jawaabayaan waxaan ku xumeyneynaa Majeerteyn..